Shirkada Trafigura oo Shaacisay Inay Dowladda Somaliland La Gashay Heshiis Lagu Balaadhinayo Haamaha Kaydka Shidaalka Berbera | Gabiley News Online
Shirkada Trafigura oo Shaacisay Inay Dowladda Somaliland La Gashay Heshiis Lagu Balaadhinayo Haamaha Kaydka Shidaalka Berbera
Shirkadda caalamiga ah ee Trafigura ayaa waxaa ay shaacisay inay Dowladda Somaliland la gashay heshiis lagu ballaadhinayo, casriyeynayo, mugga qaadkoodana loo waynaynayo Haamaha Kaydka Shidaalka ee Berbera.
Heshiiska ayaa waxaa ku jirta in Haamaha shidaalka Berbera laga dhigo mid sababi kara in la soo jiito suuqyada shidaalka dalalka Jabuuti, Itoobiya iyo dalalka kale ee Gobolka.
Sidoo kale, qorshahan ayaa waxaa uu qayb weyn ka noqonayaa casriyeynta dekedda Berbera.
Qorshayaasha waxaa sidoo kale ka mid ah kordhinta qabyada si ay awood ugu siiso maraakiibta waaweyni inay soo dhoweeyaan una ogolaadaan ganacsatada maxalliga ah inay si dhaqaale leh u soo dhoofsadaan badeecadaha la sifeeyey iyo inay helaan suuqyo dib loogu dhoofiyo, sida ay sheegtay shirkadu.
“Heshiiska wuxuu fursad siinayaa Trafigura in la geeyo Terminal-ka hadda jira si loogu keydiyo wax soo saarka batroolka la sifeeyay si suuq maxalli ah looga helo gobol istiraatiijiyad ahaan muhiim u ah,” ayuu yidhi James Josling, Madaxa Afrika ee Tamarta Tamarta ee Trafigura.
“Waxaan kala shaqeyneynaa dowladda Somaliland sidii loo yareyn lahaa xaddidada baaruudda ee shidaalka maxalliga ah, si loo siiyo fursad ay Somaliland ku waafajiso wax soo saarka heerarka suuqyada gobolka sida Itoobiya iyo Jabuuti, taas oo kor u qaadi doonta ganacsiga xuduudaha isaga gudba iyada oo la hagaajinayo tayada hawada. iyada oo ajandaha guud ee ESG iyo ballanqaadka Afrika ee Trafigura. ” ayuu intaasi sii raaciyay.
Trafigura oo hogaamiye ka ah suuqa warshadaha badeecooyinka adduunka, ayaa toddobaadkan geeyey shixnaddii ugu horraysay ee gaaska sulphur-ka ah ee hooseeya dekedda Berbera.
Heshiiskan ayaa ah talaabadii ugu horaysay ee balanqaadka Trafigura ee ah inay maalgashi ku samaynayso tas-hiilaadka shidaalka ee Berbera (“BOT”) si ay uga dhigto albaab u adeegta macaamiisha dalka gudihiisa, iyo isdhexgalka saadka shidaalka ee Geeska Afrika oo dhan.
Waxanay gacan ka geysan doontaa taageeridda himilada Dawladda Somaliland ee ah in loo beddelo dekedda Berbera inay noqoto xarun istiraatiiji ah oo ku taal gobol ay dalabku sii kordhayaan sannadba sannadka ka dambeeya.